NFC ကိုထုတ်ကုန်များ, လက်ပတ် / လက်ကောက် NFC လက်ကောက်, NFC ကိုအသိဉာဏ် Proximity ဆီလီကွန်လက်ပတ်, NFC ကိုပျော့ဆီလီကွန်လက်ပတ်, NTAG203 chip NFC soft silicone wristband, NTAG213 soft silicone bracelet, NTAG213 soft silicone wristband, NTAG216 wristband, RFID soft silicone Bracelet
ထက်ပိုပြီး 40 kinds of molds can be used for free.
The Wristband surface can printed or engraved LOGO, ပုံစံ, continuous number or internal code of the IC chip, QR ကုဒ်ကို.
အဓိကနည်းပညာ parameters တွေကို
အရွယ်: Ф65mm / Ф74mmသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်
ချိန်ညှိအမျိုးအစား: 240× 19 × 2.2mm, 16-22cm အတွက်ညှိနှိုင်းမှုအကွာအဝေး
induction အကွာအဝေး: 5~ 20cm (စာဖတ်သူကိုစွမ်းဆောင်ရည်အရသိရသည်)
power supply mode ကို: မလှုပ်မရှားနေသော
chip: NXP NTAG203, NTAG213, NTAG215, NTAG216
chip စွမ်းဆောင်ရည်(NTAG203): 168bytes (ရေးသား: 137bytes),(1Kbit EEPROM, 16 ကဏ္ဍများ, အသီးအသီးကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည်4အပိုင်းအစ, အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ချင်းစီကဏ္ဍ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် password ကိုနှင့် Access Control ရှိပါတယ်)
ကြိမ် Wipe: >100,000 ကြိမ်
ဒေတာများသိုလှောင်: >5နှစ်ပေါင်း
IP ကိုအဆင့်: IP67 / IP68
အလုပ်အပူချိန်: -25ကို C ~ + 70 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဒီဂရီ
အရောင်: အနက်ရောင်, စိမ်းလန်းသော, အနီေရာင်, အဖြူ, ပြာသော, ဝါသော, လိမ္မော်သီး, optional ကို
ရေစိုခံ, shockproof, and high temperatures resistant.
Closed-loop wristband, ကှေးနိုငျသော, easy to wear and easy to use.
Widely used in extremely humid environments swimming pool, cooling libraries, water patrol, လယ်ပြင်စစ်ဆင်ရေး, and evenalong soak in water and other harsh environments.
Access various services through NFC wristband, including micro-payments, ဝင်ခွင့်လက်မှတ်, transportation, ticketing, အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, discounts, medical services, social, and information sharing.
Surface can screen printing, carving LOGO, ရုပ်ပုံ, ဂဏန်း, QR ကုဒ်ကို.
Large quantities can specified product color.
The best price in the market is convenient for your business development.
I am interested in your product NFC Soft Silicone Wristband, NFC Intelligent Proximity Silicone Wristband
prev: RFID Crystal Epoxy Card ကို, NFC ကို Crystal Epoxy Tag ကို
နောက်တစ်ခု: RFID Adjustable Soft Silicone Wristband, NFC Soft Silicone Adjustable လက်ကောက်